အသံလွှင့်ခလုတ်များ - Switcheroo အဟောင်း ... | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ထုတ်လွှင့် Switcher: အဆိုပါဟောငျး Switcheroo ...
(အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ဘဏ်ဍာများအတွက်) တစ်ဦးစတူဒီယို၏ဗဟိုဟာထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာဗွီဒီယိုတစ်ခုသိုလှောင်ရုံ၏ဤညီမျှသို့ drives တွေကိုနှင့်ထိုက်တန်၏စီရင်ခြင်းကိုခံရလျှင်မူကား, ချက်ချင်းပျံ့နှံ့သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုကိုဆိုင်းငံ့လွှတ်ပေးရန်အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြန်လည်မွေးဖွား, တဖန်ပြန်ထွက်စေသည်။ ပစ္စည်းက 'သိုလှောင်ရုံသွားရောက်လည်ပတ်' 'ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းအပေါ်ထဲမှာစီးဆင်းကြောင့်ညာဘက်ပစ္စည်းပစ္စယတယ်ရဲ့လျှင်, နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကချောထုတ်ကုန်အဖြစ်ကိုတဖန်ထွက် back ခွင့်ပြုပါတယ်။ Streams သို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာအဖြစ်ကထွက်အောင်မှနောက်ဆုံးခြေလှမ်း scrubbed သို့မဟုတ်ဆင်ဆာခံရဖို့နောက်ဆုံးအချက်အတိတ်ကအောင်နေသည် - ထို preview ကို / ကြိုတင်မျက်နှာပြင်။ ဒီတော့အဘယျသို့သောသူတို့အားအသုံးမပြုတဲ့ကင်မရာကိုထောင့်မှဖြစ်ပျက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သည်မဟုတ်လော ဒါဟာမော်ကွန်းတိုက်သို့မဟုတ်ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးမယ့် - ဒါရိုက်တာပေါ် မူတည်. ။ အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်တယ်; UK ရှိတစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာတစ်ဦး Vision ၏ရောနှောဟုခေါ်သည်။
အဆိုပါထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုမဆိုပေးထားရိုက်ချက်အတွက်တက်ကြွစွာတစ်ခုဖြစ်သည်ထားတဲ့ကင်မရာအဆုံးအဖြတ်အကြောင်းကိုရုံမျှမက, ဒါကြောင့်လည်း switch ကိုတစ်ဦးလှည်း၏အမျိုးမျိုး, အကူးအပြောင်းနှင့်အနက်ရောင်ဖို့အလားအလာမှေးမှိန်အပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်စတိုင်ဆုံးဖြတ်သည်။ များစွာအလားအလာရှိသောအင်္ဂါရပ်များနောက်ထပ် BPM (မိနစ်နှုန်း Beats) ဖြစ်ပါသည်; ဒီဂီတကိုအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုက်ညီ VJs များအတွက်အသုံးဝင်သည်, အခြားအအမြင်အာရုံနဲ့ audio element တွေကိုညှိနှိုင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လျှင်လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသံအမြဲသင်တန်း၏ထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုအတွက်မပါဝင်လျက်ရှိ၏ တစ်ခါတစ်ရံအသံအသံရောနှောအတွက်သီးခြားစီကိုင်တွယ်လျက်ရှိ၏ BPM စိတျဝငျစားဖှယျလျှင်သို့သော်, သင်အသံဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုချထပ်မံသွားပါနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုအဝေးမှ MIDI (တူရိယာဒစ်ဂျစ်တယ် Interface) ကနေတဆင့်ဆိုးကျိုးများ manipulate ခွင့်ပြုထားတဲ့ MIDI-input ကိုကဲ့သို့တစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည်။
နှိပ်ရင်တွေ့နိုင်-in ကိုဂရပ်ဖစ်ကိုလည်းဆည်းကပ်-ပြီးနောက်နောက်ထပ် feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Chroma-key ကိုဝယ်လိုအားအတွက်မကြာခဏရဲ့အခြားမျှမျှတတဘုံအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ပုံရိပ်တွေ layer အားနိုင်စွမ်းနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာခွင့်ပြု - အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်၏ရှေ့၌သင်တို့၏သရုပ်ဆောင် (s) ကိုရိုက်ကူးနောက်ဆုံးချောနောက်ခံနဲ့တူကိုကြည့်မယ့်အရာကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးပြီးနောက်, ပဲရစ်တစ်ခုလုံးယာဉ်အမှုထမ်းပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထက်သင့်ရဲ့အခွက်တဆယ်နောက်ကွယ်မှတစ်ဦးပဲရစ်နောက်ခံပါးရိုက်အများကြီးစျေးသက်သာပါတယ်။ higher-end ဗားရှင်းကိုလည်း built-in အမျိုးမျိုးပါဝင်သည် အထူးသက်ရောက်မှုများ; Wipe နှင့်အရည်ပျော်၏တစ်ဦးထက်ပိုသိသိသာသာစုဆောင်းခြင်း။ Options ကိုပွါးများ, ဒါပေမယ့်မရတိုင်း option ကိုတစ်ဦးလျှင် se အသစ်တခုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီး, တခါတရံတွင်သင်သည်အဘယ်သို့ရတိုးမြှင်ကြာရှည်ခံမှု, ဒါမှမဟုတ်မြန်နှုန်းတူတစ်ခုခုပါပဲ။
ယင်းရောင်စဉ်၏အထက်ဆုံးအနီးတွင်ကျနော်တို့ကနဲ့တူထုတ်ကုန်များ Sony က AWS750 Anytouch; ဒါဟာအလုံးစုံခရီးဆောင်ရဲ့တဦးတည်းသို့တော်တော်များများစက်တွေထည့်သွင်း။ ဒါဟာအန်ကုဒ်, ဗီဒီယိုအသံဖမ်း, အသံရောနှော, ကလစ်ကစားသမားဆယ်ဘာသာစကားများကိုပံ့ပိုးသောဝေးလံခေါင်ဖျားကင်မရာ controller နှင့် titler streaming, တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုခလုတ်ပါဝင်သည်။ လက်ျာအလုပ်အကိုင်အဘို့အညာဘက်ထုတ်ကုန်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုလိုက်လျောကူညီပေးသည်, ထို AWS750 အမှန်တကယ်ကြောင့်နေရာအတွက်ထူးကဲသော, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုဆီသို့ရည်ရွယ်သည်။ ထိတွေ့ဖန်သားပြင်အသုံးချဖို့မဟုတ်ရင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်အံ့သောငှါခလုတ်ခရိုနီများနှင့် dial ၏နံပါတ်ပေါ်ကဆင်းလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒါဟာ6သွင်းအားစုမှတက်နဲ့အသံရောနှော, connector ကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကနေ5သွင်းအားစုမှစစ်မှန်တဲ့အချိန် Web ကိုလွှFlash® H.264, နိမ့်ဆုံးအကြောင်းအရာ 10 နာရီကြာမြင့်မား resolution ကိုမှတ်တမ်းတင်အချိန်နှင့်စာသားနှင့်ခေါင်းစဉ်ကိုဇာတ်ကောင်မီးစက်ဖွင့်ကိုင်တွယ် ကြောင်း 10 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ useable ပဲ! Sprechen Sie Deutsche? Parlez-vous français? TlhIngan Hol Dajatlh'a '? ကောင်းပြီ, ဝန်ခံရမည်, က Klingon အဘိဓါန်မပြောတတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် PTZ ဝေးလံခေါင်သီ-cam ကိုင်တွယ်ကြပါဘူး။ , ကြံ့ခိုင်စွယ်စုံ, ငါတောင်စာရင်းပြုစုမ features တွေတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အတူ။
အဆိုပါနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာရဲ့ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်လိုအပ်ချက်အချို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦး AWS750 ရုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ဆည်းပူးရဲ့တစ်ဦး neophyte VJ များအတွက် overkill ဖြစ်ပါသည် - တစ်ခုဆင်သေနတ်တွေနဲ့ကြွက်အမဲနဲ့တူရဲ့။ နည်းပညာအစဉ်အမြဲကြိုတင်အချိန်ပေါ်သွားသည်အဖြစ်ဖြေရှင်းချက်ကိုပိုပြီးတတ်နိုင်ပါစေကူညီပေးသည်, ဒါပင်ရေကူးကန်၏ရေတိမ်ပိုင်းအဆုံးပတ်လည်မှာမျောသပ်သပ်ရပ်ရပ်ပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်။ ရဲ့ရေကန်၏အလယ်တွင်တစ် peek ယူကြပါစို့ ...
အဆိုပါမြက်ချိုင့် Karrera K-Frame ကက S-စီးရီးဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးစင်တာကိုတစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အကွာအဝေးထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း, 1080p နှင့် 4K အပါအဝင် multiformat ထောက်ခံမှုနှင့်အတူရှိနေသည်။ ဤရွေ့ကားအရည်အသွေးမြင့် Switcher အဆင်သင့်အနာဂတ် (နှင့်စောင့်ဆိုင်းနေ) ဖြစ်ကြောင်း ...
အဆိုပါ Karrera K-Frame ကက S-စီးရီးဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးစင်တာတွင် 32 အများဆုံးမှတက်နှင့် 80 M / Es တစ်ပြောင်းလဲနေသောများကိုကူညီပေးသည်ရာမှတက်6စံသွင်းအားစုရှိပြီး 8 floating DPMs (အသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်အဖြစ် iDPM သို့မဟုတ် eDPM) မှတက်နှင့်အတူတစ်ဦးဖန်တီးမှုနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်။ တချို့ကသည်အခြား features တွေပါဝင်သည်: အ key pair တစုံအကျိုးရလဒ်များနှင့်အတူ 3,000 ဗီဒီယို, M / E ကိုဘတ်စ်ကား (ပေါင်း aux ဘတ်စ်ကားလက်ငင်း) ရက်နေ့တွင် optional ကို RGB color ကိုဆုံးမခြင်းမှ 50 တစျခုခုသို့မဟုတျ 1080p ဗီဒီယို 10 စက္ကန့်မှတက်ကိုင်နိုင်မတစ်ဦး onboard image ကိုစတိုးဆိုင်နှင့် က VDCP Ethernet အားကစားကွင်း application များအတွက်အပေါင်းတစ်ဒါဇင်ထက်ပိုသော features တွေကျော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ရေကန်၏ပိုပြီးတတ်နိုင်ခြမ်းမှာကျနော်တို့က Black Magic ဒီဇိုင်းရဲ့ ATEM 1 M / E ကိုအသံလွှင့် Panel ကိုရှိသည်။ ဒါဟာ 1 M / E ကို Switcher များအတွက်အလွန်အမင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်း control panel ထဲကပါပဲ။ အဆင်ပြေခြင်း, ATEM SD ကအကြား switches, HD or က Ultra HD ဗီဒီယိုက။ အဆိုပါစနစ်အ Chroma သော့ချက်တစ်ခုအသံဖိုင်ရောနှောတစ်ဦးအပြည့်အဝရွေ့လျားမှု DVE နှင့် Stinger အသွင်ကူးပြောင်းမှု, ရွေ့လျားမှုကလစ်ပ်တစ်တွင်ရှိသောမီဒီယာရေကူးကန်ရန်လွယ်ကူ access ကိုခွင့်ပြုတဲ့ SuperSource Multi-layer ကိုအင်ဂျင်ကိုခွင့်ပြုနှင့်က6aux လက်ငင်းနှင့်ထို့ထက် ပို. တက်၏ရရှိမှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ATEM အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 24 /7တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးခလုတ်, ဘူးသီးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် panel ကဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မရာများ, အသွင်ကူးပြောင်းမှု, keyers, fader, DVE ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်သင့်ရဲ့ခလုတ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်, ခွင့်ပြုခြင်း, အ ATEM နောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုပြားသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ကွင်းဆက် output ကိုအတူ Ethernet (10 / 100 / 1000) BaseT ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်။ တကယ်တော့, Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ် post ကို - မည်သည့်စတူဒီယိုလိုအပ်ချက် fit နိုငျသောစနစ်များနှင့်ရွေးချယ်စရာအပြည့်အဝအကွာအဝေးရှိပါတယ်! အားလုံးခလုတ်နဲ့ switches နှင့်အတူပုံမှန် Switcher ကနေဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဆော့ဖျဝဲမော်ဒယ်များပါ!
သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းအောက်မှာတဲ့ professional ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ရှိတစ်ချိန်ကမည်သို့ပင်ကုမ္ပဏီ၏, သင် output ကို-up, စုပ်နှင့်အမှန်တကယ်အမှန်တကယ်, ပွတ်ခြွင်းချက်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူထုတ်လုပ်မှုသို့မဆိုတက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါဝင်စားသောဗီဒီယိုအုပ်စုများတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးညာဘက် tools များရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဖွင့် (အမှန်တရားကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော) ဒါ, လက်ျာ tools တွေကိုပိုပြီးအဘို့, စာဖတ်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် blogged-In နေဖို့!
4K ATEM audio AWS750 Blackmagic ဒီဇိုင်း အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Switcher ကို အကြောင်းအရာ Karrera K-Frame ကက S-စီးရီးဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးစင်တာမှ ထုတ်လုပ်မှု switcher Sony က Anytouch သိုလှောင်ခြင်း ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုထိန်းချုပ်ရေး 2014-12-28
ယခင်: TV News Alert: ၂၀၁၅ Times Square ရှိနောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများနှင့်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအဖြစ်အပျက်တိုက်ရိုက်ရုပ်သံ
နောက်တစ်ခု: Variosystems '' Osprey လိုင်း: ဗီဒီယို Capture အကဒ်များ, မည်သူမဆို?